Minecraft Girls Music Song Band - Free music ahịa downloads
HomeMinecraftMycraft Girls Music Song Band
Mycraft Girls Music Song Band	Hapụ ikwu
Ihe atụ nke egwu egwu na-akpaghị aka site na iji ngwa igwe. Ngwa ngwangwa anyị na-emepụta egwu nke aka gị video dabere na ọrụ dị nkenke. N'oge na-adịghị anya enweghị ohere ebe a, ebe ị nwere ike ịnwale ma jiri nkà na ụzụ a kpamkpam ma na-akparaghị ókè.
Minecraft bụ egwuregwu kọmputa na-ewere ọnọdụ na ụwa na-emeghe ebe onye ọkpọ egwuregwu nwere njedebe nnwere onwe na ọrụ. E dere egwuregwu ahụ na Java ma mepụtara na 2009 site na onye mmepụta Swedish bụ Markus Persson, nke a makwaara dị ka Notch. Tinyere egwuregwu ahụ, Mojang tọrọ ntọala ahụ, nke na-aga n'ihu ịzụlite egwuregwu ahụ, n'agbanyeghị eziokwu na 2014 zụtara ya na 2,3 site n'aka Markus Persson maka ijeri XNUMX nke Microsoft. Ụwa dum na-egwu egwu na-agụnye cubes, nke na-anọchite anya ụdị dịgasị iche iche nke nwere ụdị dị iche iche. E nwere ike ịkpọ egwuregwu ahụ n'otu ọnọdụ ọkpụkpọ ma ọ bụ ọnọdụ multiplayer. Na nhazi ụwa, ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ ịmepụta otu ihe.
← Nwepụ Nsuso 5 na-aga n'ihu
Rating: 5.0/ 5. Site na 16 votes.